Deegaan noocee ah ayaa loo adeegsan karaa qalabka wax lagu rakibo?
Mashruuca LED-ga la qaadan karo
Gawaarida gawaarida lagu duubo
360 darajo 4 kamarad gawaarida loo qaybiyay DVR
360 digrii 4 bandhig muraayadaha kala qaybsan
Kaamirada qarsoon ee duubista DVR
Rikoor laba-duube oo wadista kamarad leh
HD Gawaarida Gawaarida DVR
HD rikoodhka rikoor wadista DVR
Gawaarida weyn ee gawaarida GPS GPS
Hoyga > Wararka > Warka Warshadaha > Deegaan noocee ah ayaa loo adeegsan karaa qalabka wax lagu rakibo?
1. Nooca tiyaatarka guriga: Astaamihiisu waa in dhalaalku yahay qiyaastii 2000 lumens (iyadoo la saadaalinayo soo saarista, tiradani way sii kordheysaa, isweydaarsiguna wuu ka sareeyaa), iyo saamiga dhinaca shaashadda saadaashu inta badan waa 16: 9. Dekeddo fiidiyoowyo kala duwan ah ayaa dhameystiran, oo ku habboon ciyaarista filimada iyo TV-ga qeexitaanka sare, oo ku habboon isticmaalayaasha guriga.
2. Mashruuca e-commerce ee la qaadan karo: Guud ahaan, mashruuc-baare miisaankiisu aad uga yar yahay 2 kiiloogaraam waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay mashruuc-bixiye la qaadan karo ee ganacsiga. Miisaanka badeecadani wuxuu u dhigmaa horumarinta kumbuyuutarrada khafiifka ah iyo kuwa fudud. Faa'iidooyinka mashruucyada la qaadan karo ee nidaamyada ganacsigu waa cabbir yar, miisaan fudud, iyo dhaqdhaqaaq xoog leh. Waxay u tahay beddel mashruuc-yada dhaqameedyada yaryar iyo kuwa waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Isku darka buugaagta yar ee khafiifka ah iyo kuwa fudud ama kumbuyuutarrada oo ay weheliyaan mashruucyo ganacsi oo la qaadan karo waa ganacsi mobayl internet ah. Xulashada ugu horeysa ee isticmaaleyaasha shirkadaha si ay u falanqeeyaan qaabka ganacsiga ee shirkadda moobiilka.
3. Mashruuca shirka waxbarashada: guud ahaan waxaa lagu hayaa iskuulada iyo codsiyada shirkadaha, iyadoo la adeegsanayo qaraarka caadiga ah, dhalaalka agagaarka 2000-3000 lumens, miisaanka dhexdhexaadka ah, faafitaanka kuleylka wanaagsan iyo boodhka aan habooneyn, ee ku habboon rakibaadda iyo dhaqdhaqaaqa masaafada gaaban, isdhexgalka farsamada ee hodanka ah, fudud si loo ilaaliyo , Waxqabadka qiimaha sare, oo ku habboon iibsiga jumlada iyo isticmaalka caanka ah.
4. Mashruucyada injineernimada caadiga ah: Marka la barbardhigo mashruuc-bixiyeyaasha caadiga ah, injineerada injineernimada waxay leeyihiin aagag saadaal ballaaran, masaafo dheer, iyo dhalaal sare, guud ahaanna waxay taageeraan qaab nal badan, oo si wanaagsan ula qabsan kara mashiin ballaaran iyo mashiinno fara badan Bay'adda rakibidda ayaa ah aad ugu habboon waxbarashada, warbaahinta, dowladda iyo dhinacyada kale.
5. Projector-ka masraxa xirfadeed: baare-nuucaan oo kale wuxuu feejignaan dheeri ah siiyaa xasiloonida, wuxuu xooga saarayaa heerka fashilka hooseeya, waxqabadka kala-baxa kuleylka, howlaha shabakada, iyo sahlanaanta isticmaalka Dabcan, si loo waafajiyo codsiyada xirfadeed ee kala duwan, muuqaalka ugu muhiimsan ee borojektar waa iftiinkiisu sarreeyo, kaasoo guud ahaan gaari kara in ka badan 5,000 lumen, kan ugu sarreeyana wuxuu dhaafi karaa 10,000 lumen. Cabirkiisa iyo culeyskiisa culus awgood, waxaa badanaa loo isticmaalaa ujeedooyin gaar ah, sida tiyaatarada, matxafyada, hoolalka magaalada iyo meelaha caamka ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa kormeerka taraafikada, xarumaha taliska amniga dadweynaha, xarumaha dabka iyo hagidda hawada, iwm.
6. Cabbiraadaha mashruucyada: Mashruucyadan ayaa ka duwan noocyada aan kor ku soo sheegnay ee mashruuca. Waxaa loogu yeeray mashruuc-bixiyeyaasha khariidadaha (contour projectors) maalmihii hore. Balaadhinta xukunka gaaska, mashiinka mishiinka waxa ku qalabeysan yahay taliyuhu si sax ah oo shabag ah, oo sidoo kale loo yaqaan borojekoolka cabirka. Si looga sooco iyaga mashruuc-dhaqameedka, waxaa loo yaqaannaa cabbirayaal mashruuc. Shaqadeeda ugu weyni waa gudbinta iftiinka iyada oo loo marayo qaybaha wax soo saarka si loo sameeyo borojektar ballaadhan, ka dibna loo isticmaalo filimka caadiga ah ama taliyeyaasha jiingadda si loo go'aamiyo cabbirka wax soo saarka. Iyadoo la horumarinayo warshadaynta, mashruucan cabbiraadda wuxuu noqday mid kamid ah aaladaha wax lagu cabiro ee warshadaha wax soo saarka. Saadaasha joogtada ahi waxay u qaybsan tahay saadaal toosan iyo mid toosan. Marka loo eego halbeeggeeda isbarbar yaaca, waxaa loo qaybiyaa mashruucyo qaabeeya qaab dhismeedyo iyo kumbuyuutarro dhijitaal ah.
Hore:Hordhaca shaqada duubista gaariga wadida
Xiga:Runtii ma taqaanaa sida loo isticmaalo dashcam baabuur? Runtii ma taqaan sida loo doorto oo loo doorto?
Cinwaanka: Beerta Warshadaha ee Sukeng, Magaalada Changping, Dongguan
Telefoon: +86 13423371225
@Copyright 2020-2021 Dongguan Yingjia Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd.